7 Mangshir, 2074 | 23 November, 2017 Thursday
नयाँ घरेलु महिला कामदार रोक्न पुरानालाई रुवाउनु कति जायज
2017-11-06 | तितोपाटी डट कम
तोयानाथ उपेक्षित- खाडी मुलुकमा काम गर्ने घरेलु कामदारहरुले घर विदामा जान पाउने तर फर्कन नपाउने गरि सरकारले रोक लगाएपछि उनीहरुको रोजीरोटी गुम्ने क्रम बढदो छ । परिवार धान्ने एउटै मात्र आधार घरेलु कामदारको जागिर समेत गुम्ने भएपछि ती मुलुकमा कार्यरत एकल, विपन्न र असाहय महिलाहरु नोकरी छाडेर घर जान सकिरहेका छैनन उनीहरुलाई घर विदामा गए फर्कन नदिने गरी सरकारले रोक लगाएको छ ।
बर्षौ देखि विदेशमा रहेर पटक पटक घर विदामा जादै कर्मथलो फर्कदै गर्दा श्रम र विमा गरेकाहरु गत बर्षबाट पूर्ववत काममा फर्कन नपाउने प्रतिवन्धको शिकार भएर रोजगार गुमाउदा छन । उनीहरुको यसप्रकारको पिडामा बोल्ने नेता, लेख्ने पत्रकार र कोट कचहरी गर्ने वकिल सवैका सवैलाई राजनिती मात्र लागेको छ, कसैको फूर्सद छैन उनीहरुको समस्या सुन्ने ।
अरु त अरु खाडीमा रहेका एनआरएनहरु घरेलु महिला कामदाहरुको घरविदा किन रोकिन्छ भनेर सवाल गर्न सक्दैनन नत उनीहरु भारतियबाटो हुदै दिनहुँ ओसारपसार भईरहेका महिलाहरु रोक्नु पर्छ भनेर कसिएर बोल्छन । साँच्चै अचम्मको विषय, बास्तबमै विडम्बना ।
यस्तै पिडामा परेका केही महिलाहरु गत शुक्रबार फर्मानिया पार्कमा भेला भएका थिए । उनीहरु विगतका दिनमा पनि ओमारियामा भेला भए तर कसरी अघि बढ्ने ? कसलाई आफ्नो पिडा र आवाज सुनाउने उनीहरुलाई थाहा छैन । एक दिन त खुल्छ होला नी भन्दै उनीहरुले घर आउने सपना परिवारमा बाडेको पनि दुई बर्ष भईसक्यो तर खुल्ने सुरसार छैन । आखिर छुट्टीमा जान्छु भन्ने ले नपाए पनि दोश्रो या तेश्रो मुलुकबाट मानवतस्करहरुको प्रयोग भएर विदेशीने महिलाहरुमा भने खासै कमी आएको पाईन्दैन ।
शनिश्चरे झापा घर भएकी ४८ बर्षिय यसोदा खतिवडा घर जान चाहेर पनि जागिर गुमाउन नसक्दा कुवेतमा बसिरहनु परेको विलौना सुनाउदै भन्छिन श्रीमानको ढाँड भचिएको छ म जागिर छाडेर जान सकिरहेको छैन । विगत १० बर्ष देखि यहाँ बसेर ५ जना छोराछोरी हुर्काए । गएपछि आउन पाईन्दैन भन्छन नेपालमा बसेर मेरो परिवारको खर्च कहाँबाट जुटाउने ?
बर्दिया स्यानोश्री घर भएकी ४० बर्षिय रिता नेउपाने र बर्दिया खैरेनी बस्ने समिरा कुँवरको अवस्था पनि उस्तै छ । दुबैजना ९ बर्ष देखि कुवेतमा रहेर घर जाने आउने गर्दै थिए तर यसपाली कस्तो मुख भएको सरकार बन्यो बन्यो ? नेपालमा भए भोट माग्न आउदा लोप्पा खुवाउने मन थियोरे । पत्रकार हुनुहुदो रहेछ हामीले के अपराध गरेका छौ र गरिखादाको नोकरी छाडेर घर जानु बाध्य पारिदैछ राजदुतलाई सोधिदिनुस है उनीहरले अनुरोध गरे ।
झापा विर्तामोड नगरपालिका घर भएकी विष्णु सिटौला को कुवेत बसाई पनि लगभग एक दशकको हाराहारीमा पुग्न लाग्यो । कुवेत बसेर उनले दुई छोरालाई उच्च माध्यामिक शिक्षा पुरा गराईन । उनले विगतमा बेवारिसे नेपालीको एउटा बच्चालाई समेत गोद लिएर नेपाल पुरयाईन र त्यो बच्चाको लालन पालन भईरहेको छ तर अव अब भने उनको पनि कुवेतको रोजीरोटी गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ । सधैभरी घर नगएर पनि नहुने गए फर्कन नपाउने अवस्था ले उनलाई पनि चिन्तामा पारेको छ ।
सरकारले एउटा निश्चित मापदण्ड वा निती वा श्रम संझौता र यस्तै अरु कुनै प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गरेर मात्र घरेलु कामदार खाडी मुलुकमा पठाउने वा नपठाउने भन्ने निर्णय गर्ने भनिएको भए पनि दुई बर्ष यता घर विदामा जाने महिला कामदारहरुलाई मात्र रोकेर उनीहरुको रोजीरोटी मात्र हनन गरेन की ती परिवारहरुको दैनिकी नै अस्तव्यस्त बनाई दिएको देखिन्छ ।
विगतका बर्षहरुमा घरेलु महिला कामदार स्वयम दुतावासमा गएर आफू काम मा सन्तुष्ट रहेको ले फर्कन चाहान्छु भन्दै निवेदन दिएपछि नो अव्जेक्सन लेटर दुतावासले दिने गर्दथ्यो । उक्त पत्रबाहक कामदारलाई नेपालको अध्यागमनले पनि रोक्दैनथ्यो तर अहिले भने त्यसप्रकारको व्यवस्था समेतमा रोक लगाएर ठुलै अन्याय भएन ? कोसेली न्युजको जिज्ञासामा कुवेत स्थित नेपाली राजदुत यज्ञ बहादुर हमाल भन्नु हुन्छ यो यहाँको मात्र समस्या होईन खाडीभरी नै यस्तै छ उहाँले अगाडी भन्नु भयो यो अवस्थाको जानकारी श्रम र परराष्ट्रलाई नभएको पनि होईन । हामीले यहाँबाट के गर्न सक्छौर ? उहाँको भनाई थियो सोही घरेलु भिषामा आउने पुरुष कामदार, ड्राईभर, लगायतलाई भने नेपाल सरकारले रोकेको छैन । राजदुतले दिएको जानकारीले पनि प्रष्ट हुन्छ की यो भन्दा ठुलो लैगिक विभेद अरु के हुन सक्छ ?
लामो समयसम्म घरेलु कामदारको समस्याको निकाश निकाल्न नसक्ने पुराना कामदारलाई पनि सताईरहने श्रम र परराष्ट्रको यो कस्तो निती हो ? विदेशमा रहेका घरेलु महिला कामदारहरुलाई कुन दर्जाको नागरिकका रुपमा हेरिन्छ ? उनीहरुको मातृबात्सल्यता सँग अलिकति ज्ञान राख्ने हो भने सुनुवाई पहिले नै भईसक्नु पर्ने थियो तर सवै विन्दास देखिन्छन । यहाँबाट नयाँ बहस शुरु गर्न जरुरी देखिन्छ । घरविदा जान दिनेगरीको विगतको व्यवस्थालाई अस्थाई रुपमा भए पनि खुल्ला गर्न सके आफ्ना नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबोध देखिने थियो यसमा दुतावासले पनि परराष्ट्र र श्रम लाई देखाएर पन्छन मिल्दैन । यहाँ नयाँ घरेलु महिला कामदार रोक्ने नाममा रोजगारीमा रमाईरहेका पुराना कामदार लाई रुवाउने काम किमार्थ स्वीकार्य हुनै सक्दैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला घटे
साउदीमा एक नेपालीको मृत्यु
मतदाता फकाउन खेतमा हलो जोत्दै उम्मेद्वार
कुवेत-नेपाल सिधा उडान डिसेम्बर-०६,२०१७बाट-वातानिय एयरवेज(अपडेटेड)
कम्पनीमा कार्यरत महिालाहरुले छुट्टीमा जादा दुतावासको पत्र लिन पर्ने
धुर्मुस – सुन्तली : ७ हजार नेपाली काम गर्ने कम्पनी
फोहोरी धन्दामा लागेकी थिइन् यी युवती, भाइले पनि गथ्र्यो यो घटिया काम
सुदुरपश्चिम सेवा समाज कुवेतको प्रथम वार्षिक उत्सव यही फ़ेब्रवरी १६ मा सम्पन्न हुदै